Articles tagged 'faith mazani'
Zimra to tax donations 6 January 2019 HARARE - As the broke Zimbabwean government seeks to seize every cent it can lay its hands on, the Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) will tax specific classes of donations to beef up the fiscus. The tax collector said even though donations are not incurred for the purposes of trade or in the ...
'Businesses charging in foreign currency must pay tax in forex' 19 November 2018 HARARE - The Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) is demanding businesses that are charging in foreign currency to pay their taxes in forex. In a statement issued yesterday, the tax collector said there were a lot of businesses that are collecting foreign currency but in turn paying through RTGS...
Zimra tightens screws on $200 rebate 10 November 2018 HARARE - The Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) has instructed its officers at the country's border posts to strictly enforce the $200 rebate on imported goods for personal use. In a statement released yesterday, the national tax revenue collector said if the quantities imported by a traveller...
Tax evaders give Zimra headaches 6 November 2018 HARARE - Organised criminal networks, smuggling syndicates and gold cartels are costing government millions of dollars and complicating Zimbabwe Revenue Authority (Zimra)'s revenue collection efforts. This comes as Zimra has called for a collaborative effort, a national consensus and commitmen...
Zimra boss on career, life as single mom 21 October 2018 HARARE - The Daily News on Sunday's Tendayi Madhomu speaks to Zimra boss Faith Mazani, below are excerpts of the interview. Q: Tell us about yourself A: Faith Mazani, born in Mhondoro, last in a big family of 15, child of a peasant farmer. I grew up and was raised on proceeds from peasant f...
Zim tax system hit by low compliance levels 20 October 2018 HARARE - Zimbabwe's tax system is characterised by low compliance levels as registered corporate taxpayers are not remitting their dues, a tax expert has said. Speaking at The Financial Gazette tax review conference last week, Christina Muzerengi, a tax partner with Grant Thornton, said the th...
High debt affects Zimra collections 19 October 2018 HARARE - The Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) says high debt continues to negatively affect optimum revenue collection, as obligations increased to $4,55 billion during the third quarter ended September 30, 2018. The revenue collector said despite a positive performance it has launched a ta...
Zimra sued for 'evading tax' 12 October 2018 HARARE - They are mandated by an Act of Parliament to clamp down on tax evasion but the script appears to have changed as Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) has been dragged before the High Court for evading whistle blower tax. A Harare man is demanding 10 percent of $18 million recovered from...
Taxman in voluntary compliance 29 September 2018 HARARE - The Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) is strengthening voluntary compliance measures in order to tackle rampant tax evasion, the tax collector's chief Faith Mazani, has said. This comes as the issue of tax corruption and evasion has become complex countrywide with experts likening it...
Zimra to conduct rummage sale 21 September 2018 HARARE - Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) is set to conduct a rummage sale auction of forfeited and uncleared motor vehicles and goods at Forbes Border Post, Mt Selinda and Mutare Customs House next Wednesday. This comes a few months after the authority's Commissioner-General, Faith Mazani, ...
Zimra responds to Zacc investigations 7 September 2018 HARARE - Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) says it will take action against its employee Charles Juare, who has been implicated in a bribery storm, only after the investigations by the Zimbabwe Anti-Corruption Committee (Zaac) are complete. Speaking in an interview with the Daily News, after ...
Zimra calls for Income Tax returns 28 June 2018 HARARE - The Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) says the window is still open for the submission of Income Tax Returns, critical for the issuance of tax clearance certificates. Zimra had earlier indicated that the deadline for the submission of the Income Tax Returns was April 30. But in a ...
Zimra resolves impasse with workers 28 June 2018 HARARE - Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) Commissioner-General Faith Mazani has said the tax agency has come to an agreement with workers who had threatened to besiege Zimra head office last week Friday. The Zimra workers had stated that they were going to stage a demonstration outside the Z...
Be smart; Zimra counsels govt 11 June 2018 HARARE - In line with its new economic thinking, government must have checks and balances in place to guard against unscrupulous investors who may want to take advantage of its “Zimbabwe is open for Business” mantra. This was said by the commissioner-general of the Zimbabwe Revenue Authority (...
New Zimra boss exposes govt rot 10 June 2018 HARARE - The newly-appointed commissioner-general of the Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) has blew the whistle on civil servants from the other arms of government who are working in cahoots to deprive the fiscus of the much-needed tax revenue. Zimra boss, Faith Mazani, told parliamentarians ...